माधव नेपालको विस्वासिलो पात्र प्रमेश हमाल को हुन ? | नेपालन्युज
आईतवार , १३ भाद्र , २०७८
नयाँ गठन गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा ५ सदस्यीय अन्तरिम स्थायी कमिटी गठन गरिएको छ।
स्थायी कमिटी सदस्यमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, वेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल रहेका छन। अन्तरिम स्थायी समितिमा रहेका ४ जना सदस्य राजनैतिक नेताका रुपमा परिचित रहेका छन। माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पार्टीको नेतृत्व गर्नुका साथै मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत कार्य गरिसकेका छन। मुकुन्द न्यौपाने पनि पार्टी नेतृत्व तहमा लामो समयदेखि संलग्न हुनुका साथै मन्त्री भैसकेका व्यक्ति हुन।
बेदुराम भुसाल पनि साँसदका साथै बुध्दिजीवीका रुपमा परिचित छन। सो पार्टीमा स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरिएका प्रमेश हमाल को हुन त ?
तत्कालिन पंचायतीकालमा काठमाडौंको रक्तकालीमा एकजना सरकारी कर्मचारीको निवास थियो। स्थानीय नेवारहरुको बाहुल्यता रहेको सो क्षेत्रमा उकत घर मात्र क्षेत्रीको घर थियो। पछि उक्त घर त्तत्कालिन नेकपा मालेको सेल्टर हुन गएको थियो। सोही घर प्रमेश हमालको थियो। उनका भाई स्वर्गीय प्रमोद हमाल जनवादी गीत गाउनेक्रममा रामेश, मन्जुल लगायतका जनवादी गीतका गायकहरुको संगतबाट नेकपा मालेको सम्पर्कमा आएका थिए। गाँउ गाँउबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ जस्ता जनवादी गीतका गायक हमालले लेखे तथा संगीत दिएको तथा गायक रामेशले गाएको आउ बनाउ हाम्रा हातहरु गीत अझै लोकप्रिय रहेको छ। त्यसैको कारण उक्त घर पार्टी प्रतिबन्धित अवस्थामा सेल्टर समेत बन्न गएको थियो। पढाईमा अब्बल स्वर्गीय प्रमोद हमाल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जहारलाल नेहरु विश्व विध्यालयका पिएडीका स्कलर थिए। उनि नेकपा एमालेको बुध्दिजीवी फाँटमा संलग्न थिए। पार्टीको घरमै सेल्टर बन्नेक्रममा उनका दाजु प्रमेश हमाल पनि पार्टीमा लागेका थिए। त्यतिखेर नेपाल बैंक लिमिटेडमा काम गर्न कयौं कर्मचारी माले पार्टीमा राजनीति गर्दथे। प्रमेश हमाल नेपाल बैंक लिमिटेडका अधिकृत थिए। त्यसो त माधव नेपालनै नेपाल बैंक लिमिटेडमा काम गर्दथे। अहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी थिए।
नेकपा एमाले सरकारमा प्रवेश गरेपछि प्रमेश हमाललाई बेल्जियमको राजदूत बनाईरहेको थियो। त्यतिखेर उनि नेदरल्याण्डस र लक्जम्बर्सको पनि राजदूत भएका थिए। उनि युरोपियन युनियनमा नेपालको हेड अफ मिसन तथा हेगमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा पनि कार्यरत थिए। उनि संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको नायव स्थायी प्रतिनिधिका सथै नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयमा पनि कार्यरत थिए।
सन १९७६ मै पार्टी प्रवेश गरेका उनि पार्टीका बिभिन्न पदमा रहेका थिए। उनि बुध्दिजीवी फाँटमा सलग्न रहेका थिए। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सरिक भएको तथा शालीन तथा ओझेलमा रहने हमाल त्यति चर्चा भने रहेको पाईदैन। .
माधव नेपालपप्रति भीम रावलको कडा टिप्पणी, ट्वीटरमा यस्तो लेखे
माधव नेपाल संसदीय दलको नेता बन्दै
माधव नेपाललाई मन्त्री छान्न सकस